Tanzania yakagadzirirwa musangano weUNWTO Commission for Africa gore rinouya
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Tanzania Breaking News » Tanzania yakagadzirirwa musangano weUNWTO Commission for Africa gore rinouya
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • Tanzania Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Dr. Ndumbaro weTanzania uye UNWTO Pololishkavili
Tanzania ichagadzirira kutora United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) Commission ye Africa muna Gumiguru gore rinouya.
UNWTO yakatsigira Tanzania semunhu achakwikwidza uye musangano we 65th UNWTO Commission ye Africa 2022 musangano mushure mekunge nyika iyi yeAfrica yaratidza kuda kwayo kuitisa musangano wepamusoro wekushanya.
Musangano uyu unotarisirwa kuitirwa ku Arusha, guta revashanyi kuchamhembe kweTanzania.
Vatori vechikamu vanowana mikana yekushanyira kiyi mapaki epamoyo anotungamira uye Gomo reKilimanjaro, kunze kwenzvimbo dzinoverengeka dzemagariro munzvimbo iyi.
UNWTO yakatsigira Tanzania kuti iitise musangano uyu panguva yemisangano yevashumiri yakaitirwa kuNamibia neCape Verde muna Chikumi uye kutanga kwegore rino umo makurukota eAfrica ezvekushanya vakaungana kuzokurukura danho rekushanyirwa rekondinendi pane zvekudyara.
Munyori Mukuru weUNWTO VaZurab Pololikashvili vanga vatambira chikumbiro na Tanzania muridzi wemusangano panguva yeBrand Africa Summit iyo yakarongwa neUNWTO uye yakaitirwa muWindhoek (Namibia) muna Chikumi gore rino.
Musangano weBrand Africa wakwezva maMinisitiri eVashanyi gumi nemashanu kubva mukondinendi iyi vakabvuma kushanda pamwechete kuti vawane mhinduro yaizomutsiridza indasitiri yekushanya yekondinendi yatambudzwa zvakanyanya nedenda reCoronavirus (COVID-15).
Makurukota akavimbisa kushanda pamwe chete vozogadzira rondedzero nyowani yekuvandudza nzvimbo dzekushanya kudunhu rese re Africa.
Sarudzo ku tsigira Tanzania mukwikwidzi wekutora Musangano wechi65th weUNWTO Commission for Africa Musangano gore rinouya wakaitwa ku64th UNWTO Commission for Africa Musangano wakaitirwa muSal Island yeCape Verde svondo rapfuura.
"Takurukura nezve musangano wechi65 weWorld Tourism Organisation (UNWTO) uchaitirwa kuTanzania uyo unozoisa nyika ino pamepu yekushanya," akadaro Gurukota rezveKushanya kuTanzania, Doctor Damas Ndumbaro.
Musangano wakatarwa gore rinouya unotarisirwa kukoka makurukota makumi mashanu nemana ekushanya kubva kumatunhu ese eAfrica.
Minister vanga vatungamira nhumwa dzeTanzania kumusangano wakasarudzira nyika yeAfrica iyi nhengo yeUNWTO Chirongwa neBudget Committee (PBC).
UNWTO Nhengo dzeNhengo dzeAfrica dzichashanda pamwechete kusimbisa rondedzero nyowani yekushanya kukondinendi iyi.
Kuona zvirinani kugona kwekushanya kwekufambisa kupora, UNWTO nenhengo dzayo vachashanda zvakare neAfrican Union pamwe nevemasangano akazvimirira kusimudzira kondinendi kune vateereri vepasi rose kuburikidza neakanaka, nyaya-yakanangana nevanhu uye nyora inoshanda.
Nekushanya kwakazivikanwa sembiru yakakosha yekusimudzira nekusimudzira nyika, UNWTO yakanga yatambira nhumwa dzepamusoro kumusangano wekutanga wedunhu wekusimbisa Brand Africa wakaitirwa kuNamibia.
Musangano uyu wakaratidza kutora chikamu kwehutungamiriri hwezvematongerwo enyika hwekugara kwenyika Namibia, pamwe nevatungamiriri vehurumende nevevanhu vakazvimirira kubva kukondinendi yose.
UNWTO Secretary-General Zurab Pololikashvili akagamuchira zvakajairika kutsunga kufunga zvakare pamwe nekutangazve kushanya.
"Nzvimbo dzekuAfrica dzinofanira kutungamira mukupemberera nekusimudzira tsika dzakanaka dzekondinendi, simba revechidiki uye mweya wemabhizimusi, uye gastronomy yayo yakapfuma," akadaro.